40 meelood oo dheeraad ah oo loogu talagalay dhiirigelintaada | Abuurista khadka tooska ah
Bil kasta waxaan dhignaa labo ama seddex uruurinta shaqooyinka, sidaa darteed waxaan raaceynaa mid kale si aadan uga caban karin in waxyigu uusan kuugu imaanin inuu naqshadeeyo taada, waxaana jira fikrado badan oo halkan laga fikiro, oo aan la koobiyeyn.
Afartan ka dib boodada ka dib, waxay ila tahay inay jiraan shan ama lix mid aad u fiican, halka inta soo hartayna aan soo bixin. kor ku xusan wixii aan horay u soo aragnay munaasabadaha kale ama waxa aan ka filan karno faylalka wanaagsan.
Waxay sii joogayaan boodka ka dib, oo ay soo ururiyeen WebDesignLedger.
3 wiilka Schoen
4 Daboolida wuxuush
5 Mustaqbalka geesinimada leh
9 Ewen faafaahin
11 Garaaca Christian
14 Maskaxda 3d
15 Derry Lozano Hoyland
21 Bunni hodan ah
27 Alexander Munck
28 Shannon iibiyaha
29 Gooyaa Serial
35 Loo sameeyay aniga oo kale
Xulashada Wing Cheng, naqshadeynta iyo naqshadeynta websaydhka.
Shaqada farshaxanka muuqaalka leh ee Joe Lifrieri
Mustaqbalka geesinimada leh
Mustaqbalka Bold waa bandhig bandhig naqshadaysan iyo jihada farshaxanka ee Graeme Stephenson.
Jiheynta farshaxanka iyo naqshadeynta garaafka ee Sylvain Toulouse.
Shaqada Giles Revell waa baaris socota oo ku saabsan suurtagalnimada garaafka, sawirrada fikradaha ku saleysan iyo siyaabaha kala duwan ee sawirrada sawirradu ay u noqon karaan qaab, dusha ama sameynta iyadoo la adeegsanayo habka ugu fudud.
Kyle Tezak waa naqshadeeye muuqaal ah oo ku nool kana shaqeeya magaalada Chicago. Wuxuu jecel yahay astaamaha, xarfaha, astaamaha iyo inuu kooban yahay.
Grid waa joogitaanka khadka tooska ah ee naqshadeeye naqshadeeye Ashwin Patel.
Xayeysiinta Christian Knopf.
Xayeysiinta maareeyaha mashruuca iyo naqshadeeye naqshadeeye Thibault Jorge.
Mindwork 3d waa faylalka internetka ee farshaxanka 3D Can Tuncer.
Derry Lozano Hoyland
Tani waa faylka Vasjen Katro.
Bunni hodan ah
Xayeysiinta Ryan O'Rourke.
Serial Cut waa istuudiyaha ku saleysan Madrid, oo la aasaasay 1999 by Sergio del Puerto, oo ka shaqeynaya mashaariic kala duwan oo caalami ah, laakiin inta badan diiradda saaraya Jihada Farshaxanka.
Xayeysiinta Aline Caron.
Loo sameeyay aniga oo kale
Guriga sawirqaade Daryl Campbell.
Waxaan ahay Helen Gizi - naqshadeeye naqshadeysan oo ka timid Thessaloniki, Griiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 40 xayeysiis oo dheeraad ah oo loogu talagalay dhiirigelintaada
qorshaha cunto dijo
Kani waa dukumenti wanaagsan. Aad ayaan ugu faraxsanahay in shabakada aduunka oo dhan ay haysay qoraal qoran.
Ka jawaab qorshaha cuntada